डाक्टर साथी_नेपाल मेडिकल भोलिन्टियर सोसाइटी : July 2012
आज विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लूएचओ ले विश्व हेपाइटाइटिस दिवस मनाइरहेको छ । नेपाल पनि हेपाटाइटिसको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । हिजोआज यसको संक्रमण पनि ह्वात्तै बढेको छ ।विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य क्षेत्रको सर्वाधिकार सम्पन्न निकाय हो, जसले स्वास्थ्यका विविध नीति–नियम बनाउने,कार्यान्वयन गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने गर्दछ । एड्सको बारेमा काम गर्ने संघसंस्था धेरै छन् र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु धेरै गरिएका छन् तर हेपाटाइटिसको सन्दर्भमा त्यति धेरै चासो लिइएको पाइँदैन ।सरकारी संयन्त्र पनि एचआईभी÷एड्सका बारेमा जति लागेको छ, त्यति नै हेपाटाइटिसको बारेमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०११ मा पहिलोपल्ट विश्व स्वास्थ्य संगठनले आजकै दिन यो दिवस मनाएको थियो । हुन त त्यसअघि पनि नागरिक समाज र विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाउँदै आएका थिए । ढिलै भए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले महसुस गर्नु राम्रो संकेत हो । विश्वभरि नै हेपाटाइटिसको संक्रमण बढ्दै छ । यसका लागि विभिन्न देशका सरकारहरु,राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु, नागरिक समाज, व्यापारी प्रतिष्ठान र स्वयं व्यक्ति पनि सचेत भएर सहकार्य गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
हेपाटाइटिस ‘बी’ पत्ता लगाउने प्रोफेसर बारुच ब्लम वर्गको जन्म दिन सम्झनामा २८ जुलाईलाई हेपाटाइटिस दिवसको रुपमा मनाइएको छ । सन् २०१२ को नारा Its Closer than you think अर्थात् ‘तपाईंको सोचभन्दा यो नजिक छ’ रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको जानकारीअनुसार यो नाराका विभिन्न अर्थ हुन सक्छन् । जुनसुकै ठाउँका व्यक्तिले हेपाटाइटिसबारे सोच्नुपर्दछ किनभने यो जुनसुकै व्यक्तिमा जुनसुकै बेला सर्न सक्छ ।सर्तकता अपनाउनुपर्दछ किनभने जुनसुकै तरिकाबाट यसले तपाईंलाई आक्रमण गर्न सक्दछ । यो रोग लाग्नेबित्तिकै यसका बाहिरी लक्षण र चिह्नहरु देखिनु जरुरी छैन । त्यसैले रोग पत्ता लगाउन विभिन्न जाँचपड्ताल गर्नुपर्दछ । धेरैभन्दा धेरै जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर हेपाटाइटिससम्बन्धी अन्धविश्वासलाई हटाउनुपर्दछ ।हेपाटाइटिससम्बन्धी भेला, गोष्ठी, ¥याली आदिमा धेरैभन्दा धेरैलाई सहभागी गराएर उनीहरुलाई हेपाटाइटिसबारे प्रयोगात्मक प्राविधिक ज्ञान दिनुपर्दछ । हेपाटाइटिस प्राणघातक हुन सक्दछ । यसले कुनै लक्षणविना प्रत्येक १२ मानिसमा एकलाई संक्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । संसारभरमा करिब ५ करोड व्यक्तिलाई यसको संक्रमण भएको देखिन्छ । हेपाटाइटिस जुनसुकै उमेर, जात, समूह, पेशाका व्यक्तिलाई हुन सक्दछ ।
मानव शरीरमा कलेजो महत्वपूर्ण अङ्ग हो । यो सुन्निएको अवस्था नै हेपाटाइटिस हो । विभिन्न विषाणुको संक्रमण, औषधिको प्रयोग, क्यान्सर आदि हेपाटाइटिसका कारण हुन् । मुख्य रुपमा हेपाटाइटिस भाइरस ए.बी, सी, डी र ई पर्दछन् । संसारमा १४ लाख व्यक्तिलाई प्रत्येक वर्ष हेपाटाइटिस ‘ए’ ले आक्रमण गर्दछ भने २ करोड हेपाटाइटिस ‘बी’ को शिकार भएको पाइन्छ । हेपाटाइटिस ‘सी’ ले भने १५ करोडलाई आक्रमण गरिसकेको छ । प्रत्येक वर्ष करिब १० लाखको मृत्यु हेपाटाइटिसबाट भइरहेको छ भने ७८ प्रतिशत कलेजोको क्यान्सरको कारण हेपाटाइटिस बी र सी देखिएको छ ।
दिसाको माध्यमबाट सर्ने यस रोगले विद्यालय जाने बालबालिका, जवान, वृद्धवृद्धा सबैलाई आक्रमण गरेको पाइन्छ । यी दुई महामारीमूलक हेपाटाइटिस गर्मी मौसममा बढी देखिन्छन् । ढलनलको उचित प्रबन्ध नहुनु, शुद्ध खानेपानीको अभाव, अशुद्ध खाना, स्वास्थ्य चेतनाको अभाव आदि यसका प्रमुख कारण हुन् । शरीरमा हेपाटाइटिस ए विषाणु प्रवेश गरेको २–४ हप्तामा र हेपाटाइटिस ई विषाणु प्रवेश गरेको २–८ हप्तामा जन्डिसलगायतका लक्षण तथा चिह्नहरुदेखिन थाल्दछ । सरसफाइ राम्रो नभएको विकासोन्मुख देशका ९० प्रतिशत बालबालिका दश वर्षको उमेर नपुग्दै संक्रमित भएको पाइन्छ ।
लक्षणहरु तथा चिह्नहरु
पहिलो अवस्था (१ देखि २ हप्ता)ः खानामा रुचि घट्दै जानु, वाकवाकी लाग्न थाल्नु, ज्वरो आउनु, दिसा तारन्तार हुनु,पेटको दायाँ कोखा दुख्नु आदि पर्दछन् । दोस्रो अवस्थाः पहिलो अवस्था देखिएको एक हप्तापछि यो अवस्था देखिएको पाइन्छ ।यसका प्रमुख लक्षणमा दिसा तथा पिसाबमा पहेंलोपना, आँखा, नङ, मुख र शरीरमा क्रमशः पहेंलोपना बढ्दै जान्छ ।तेस्रो अवस्थाः दोस्रो अवस्थाका लक्षणहरु हराएर जान्छन्, बिरामी कमजोर हुन्छ तर सन्चो महसुस गर्दछ ।
उपचार तथा सजगता
बिरामीले प्रशस्त झोल तथा सफा र ताजा खानेकुरा खानुपर्छ, बिरामीलाई आराम अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ, जथाभावी जडीबुटी तथा एलोपेथीका औषधिले ज्यान जानसक्छ किनकि कमजोर कलेजो थप कमजोर भई काम गर्न नसक्ने हुन सक्दछ । तपार्इंहरुलाई यो अवगत नै छ कि हामीले प्रयोग गर्ने प्रायः औषधिहरु कलोजोको माध्यमबाट पच्ने हुन्छ । व्यक्तिगत शुद्धता र सरसफाइ विशेष गरी खाना खानुअघि र खाना खाएपछि साबुनपानीले राम्ररी हात धुनुपर्दछ । उमालेर र जीवाणुनाशक औषधि प्रयोग गरेर पानी खानुपर्दछ । राम्ररी पकाएको खानेकुरा खानुपर्दछ । बिरामीले प्रयोग गरेका कपडाहरु राम्ररी घाममा सुकाएरमात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । सबैले चर्पीमा दिसापिसाब गर्ने बानी बसाल्ने र बालबच्चाको दिसा पनि चर्पीमा विसर्जन गर्ने गर्नुपर्दछ । घरवरिपरिको ढल निकासलाई व्यवस्थित पार्दै जानुपर्दछ । बिरामी शिथिल हुँदै गएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा लानुपर्दछ । गाउँघरमा जन्डिस झार्ने भनेर टाउकोमा काँसको बटुका राखी अण्डा घोलेर मन्त्र पढेजस्तो गर्ने अनि घोलिएको अण्डा देखाएर जन्डिस झ¥यो भन्ने कुसँस्कार एकदमै गलत हो ।
हेपाटाइटिस बी भाइरसले कलेजोमा संक्रमण गर्दछ । संसारभर करिब २ करोड जनसंख्यालाई यसले आक्रमण गरिसकेको छ भने यसका विभिन्न असरबाट प्रत्येक वर्ष ६ लाखले ज्यान गुमाइरहेको विकराल अवस्था छ । एउटा मननयोग्य कुरा के छ भने एचआईभीभन्दा ५० देखि सय गुणा बढी खतरनाक यो भाइरसको संक्रमण सुरक्षित व्यवहार, सचेतना र भ्याक्सीनबाट रोक्न सकिन्छ । संक्रमित व्यक्तिको रगत तथा रगतजन्य पदार्थ ग्रहण गर्दा, असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट अङ्गग प्रत्यारोपण गर्दा, आमाबाट बच्चा जन्मँदा, लागूऔषधको लागि सुईको असुरक्षित प्रयोग आदिबाट यो सर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीहरु जस्तैः सर्जन, ल्याबमा काम गर्ने व्यक्तिहरु उच्च जोखिममा पर्दछन् । खाना तथा पानीको माध्यमबाट हेपाटाइटिस बी सरेको पाइएको छैन । शरीरमा विषाणु पसेको करिब ३० देखि १ सय ८० दिनमा यसले लक्षण तथा चिह्नहरु देखाउन थाल्दछ ।
प्रायः व्यक्तिमा पहिलो चरणमा कुनै लक्षण तथा चिह्नहरु देखिँदैन । कसै–कसैले जन्डिस, वाकवाकी लाग्ने, खाना मन नलाग्ने, पेट दुख्ने, उल्टी गर्ने आदि लक्षणहरु देखाउँछन् तर केही व्यक्तिमा भने दीर्घ रुपमा कलेजोको संक्रमण भई कलेजोको सिरोशिस तथा क्यान्सर हुन्छ । मुख्यतः ९० प्रतिशत दीर्घ संक्रमण चाहिँ नवजात शिशुमा देखिएको छ । हेपाटाइटिस बी बाट संक्रमित ९० प्रतिशत स्वस्थ्य जवान व्यक्ति छ महिनामा आपैंm निको हुन्छ ।
हेपाटाइटिस बी को उपचार यही हो भनेर भन्न नसकिए पनि पौष्टिक खानपान, झोलिलो खानेकुरा र स्वस्थ्यकर आनीबानी अपनाउनुपर्दछ । हेपाटाइटिस बी बाट संक्रमित दीर्घरोगीहरुलाई इन्टरफेरोन, एन्टीभाइरल औषधिहरु प्रयोग गरिन्छ । अल्पविकसित देशहरुमा यो रोग पत्ता लाग्दा कलेजोको क्यान्सर भइसकेको पाइन्छ, जसले गर्दा रोग पहिचान गरेको केही महिनामै बिरामीको मृत्यु हुने गर्दछ । विकसित देशहरुमा अप्रेशन तथा केमोथेरापीबाट केही वर्ष बढी बाँच्न सक्ने उपचारहरु गरिन्छ । कहिलेकाहीँ कलेजो प्रत्यारोपणबाट नयाँ जीवन प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ ।
हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हिजोआज नेपाल सरकारले आप्mनो खोप कार्यक्रममै यो भ्याक्सिन समावेश गरेको छ । सन् १९८२ देखि १ करोडभन्दा बढी हेपाटाइटिस बी भ्याक्सिन प्रयोग भइसकेको पाइन्छ ।
झन्डै–झन्डै हेपाटाइटिस बी को जस्तै अवस्था देखाउँदछ । यो संक्रमण सामान्यभन्दा अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । करिब १ करोड मानिस हेपाटाइटिस सी को शिकार भइसकेका छन् भने ३ लाख ५० हजार प्रत्येक वर्ष मर्ने गर्दछन् । यसको रोकथामको लागि अहिले कुनै भ्याक्सिन प्रयोग नभए पनि यसको उपचार सम्भव छ । रगत तथा रगतजन्य पदार्थको प्रयोग, अङ्ग प्रत्यारोपण र सुईमार्पmत् लागूऔषध प्रयोगबाट तथा जन्मिको क्रममा आमाबाट बच्चामायो भाइरस सर्न सक्दछ । यो खाना तथापानीबाट सर्दैन ।
उपचार तथा सजकता
सबै हेपाटाइटिस सी को उपचार नचाहिन पनि सक्दछ । इन्टरफेरोन र रिवाभिरिन नामक एन्टीभाइरल ओषधिको प्रयोग गरिन्छ । नयाँ औषधि टेलाप्रिभिर र बोसीप्रभिर आदि प्रयोग हुन थालेका छन् तर सबैको उपचार सम्भव नहुन सक्दछ किनकि यी औषधिहरु सहजै र सहजै प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा विरामीमा प्रयोग गर्न सकिन्न । यसको आप्mनो भ्याक्सिन नभएकोले सचेतना अपनाउनुपर्दछ । आवश्यकताविना र असुरक्षित रुपमा सुई प्रयोग गर्नु हुँदैन । हेपाटाइटिस सी जन्य फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । लागूऔषध प्रयोग त्याग्नुपर्दछ । असुरक्षित यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन । असुरक्षित रगत तथा रगतजन्य पदार्थहरुको प्रयोग गर्नु हुँदैन । ट्याटु खोप्ने,एक्युपन्चर, नाक–कान छेंड्नेमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारी तवरबाट हेपाटाइटिस सम्बन्धमा गरिएका खोज–अनुसन्धान न्यून छन् । आवश्यक जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि कम छन् । हेपाटाइटिसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर एके सिंह बताउनुहुन्छ । हेपाटाइटिस बि को खोप हान्ने नाममा ठगीका घटनाहरु पनि भएका छन् ।यसको उचित तरिका र मात्राको जानकारी आवश्यक देखिन्छ । हुन त नेपाल सरकारले आप्mनो खोप कार्यक्रममा हेपाटाइटिस बी लाई राखेर सराहनीय काम गरेको छ तर अभैm अपुग छ ।
आज विश्व हेपाटाइटिस दिवसको दिन तपाईं–हामी सबै मिलेर स्वस्थ्य नेपाल बनाउन कम्मर कसौं । सरकारी, गैरसरकारी संस्था, सहकारी, क्लब, विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवाला व्यक्ति सबै मिलेर अघि बढ्नैपर्दछ । नयाँ नेपालको बहस भइरहेको बेलामा हेपाटाइटिसमुक्त स्वस्थ्य नेपाल बनाउन पनि आजैबाट आवाज बुलन्द गरौं ।
सन्दर्भः विश्व हेपाटाइटिस दिवस
२८ जुलाई २०१२ शनिबार
वायुविकार अथवा चलनचल्तीको भाषामा भनिदै आएको ग्यास्ट्रिक हामी जस्तो धेरैलाई यो समस्या छ ।
डाक्टर साब ! मेरो पेट पोल्यो, छाती पोल्यो, श्वास फेर्न गाह्रो भयो, वाकवाकी लाग्यो, अनेकन समस्या लिएर आउनुहुन्छ दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरु ।
हजुर आज हामी त्यही समस्याको वारेमा चर्चा गर्ने छौ ।
वायु विकार(ग्यास्ट्राइटिस) भनेको के हो ?
आमाशयको श्लेश्मा झिल्कीको श्रोथ हुनु अथवा सुनिनुलाई वायुविकार भनिन्छ । यो २ प्रकारको हुन्छ । क) तीब्र वायूविकार ख) दीर्घ वायूविकार
यसमा आमाशयको श्लेश्म झिल्लीको सुनने अवस्था छिटो हुन्छ अथवा तीव्र हुन्छ ।
चुरोट, जाड रक्सीको अत्याधिक सेवन गर्नाले,विषालु खाना खानाले, अत्याधिक औषधिहरुको सेवन,पेटमा अत्याधिक वायल आउनाले, अत्याधिक चिन्ता, थकान तथा काम, हेलीकोब्याक्टर पाइलोरीको सन्क्रमण
वाकवाकी लाग्नु,वान्ता हुनु,खानामा अरुची,मुटु दुख्नु,छाती पोल्नु,पेटको माथिल्लो भागमा असजिलो महशुस हुनु
दीर्घ वायूविकार हुनुको मुख्य कारण थाह नभएता पनि यसका सम्भावित कारणहरु तीब्र वायूविकारसँग मिल्दो जुल्दो छ जुन निम्न प्रकार छन्:-
दीर्घकालीन रुपमा अत्याधिक मद्यपान र धुम्रपान गर्नु,अस्थिरता भएको ब्यक्ति,घाँटी तथा टन्सिलको दीर्घकालीन समस्या,धेरै अमिलो/ पीरो खानाको सेवन,अत्याधिक चिया तथा कफीको सेवन,खानामा
अनियमितता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी,एलेर्जी र हेलीकोब्याक्टर पाइलोरी सन्क्रमण
दीर्घ वायूविकार भएका व्यक्तिहरुलाई पनि वाकवाकी लाग्नु, वान्ता हुनु, खानामा अरुची, मुटु पोल्नु, छाती पोल्नु,अपच हुनु,ग्यास भरिनु,डकार आउनु समस्या लामो समयसम्म लगातार भइरहन सक्ने हुन्छ । यस सँगसगै अन्य समस्याहरु साथसाथै कुपोषित देखिनु जस्ता अनेकन समस्याहरु हुन सक्दछ ।
निरन्तर रुपमा यदि वायूविकार भइरहनु यसवाट हुन सक्ने जटिलताको नजिक पुग्नु नै हो । वायूविकारलाई यदि समयमा उपचार नगरेमा अम्लपित्त हुनसक्ने हुन्छ । जुन पेटको अथवा पाचनप्रणालीको एउटा जटिल समस्या हो । साथसाथै वायुविकारकै कारणले अल्सर हुन गई रगत बग्ने समस्या हुन सक्छ जसले गर्दा शरीरमा रगतको मात्रा पनि कम हुन जान्छ , यस अवस्थालाई हामी रक्तअल्पता भएको भन्ने बुझ्दछौ । वायूविकारको समयमा उपचार नहुँदा पछि गएर क्यान्सर पनि हुनसक्ने हुन्छ । तसर्थ यसको उपचार गर्न तर्फ हामी उन्मुख हुनु पर्दछ ।
अत्याधिक धुम्रपान तथा मद्यपान गर्ने बानी त्याग्नु पर्दछ ,पेटलाई असर गर्ने खानेकुरा जस्तै पीरो तथा अमिलो खाना नखाने अथवा कम गर्ने,तरल पदार्थ वढी खाने ,नरम खानेकुराहरु खाने ,ब्रत नबस्न सन्तुलित भोजन सेवन गर्ने ,थोरै थोरै खाना पटक/पटक खाने ,औषधिको उचित सेवन दक्ष स्वास्थ्यकर्मी-डाक्टरको सल्लाह बमोजिम खाने ,समस्याले जटिल रुप लिए तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिने ।
धेरै जसो समस्याहरु हाम्रो आनिवानी र जीवनशैलीकै प्रभाववाट निम्तिएका हुन्छन् । हामीले गरेको सानो सकारात्मक कार्यले भविष्यमा निम्तिने जोखिमबाट हामी स्वयं नै बच्ने हो ।
यही सन्देश प्रदान गर्दछौ ।